Eritreritra mamono: Endriky ny ditra ara-nofon’ny Ejipsiana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Febroary 2009 7:09 GMT
Rehefa vakiana ny tantaran’i Asser Yasser sy ny fihetsiky ny tontolon’ny blaogy manoloana ny lahatsoratra nalefany, dia manoratra ny Wandering Scarab:
Nahatsikaritra ny fitombon’ny isan’ireo mpitoraka bolongana aho tato ho ato izay miandany manohitra ny fiakaran’ny taha eo amin’ny fanadalana ara-nofo ao Ejipta. Efa hitako ny mpitoraka bolongana fa manoratra amim-pahagagana ireo vezivezin-dahatsoratra nahazoan’izy ireo sy ny olon- kafa traikefa avy tao anatin’ny lohahevitra manohana ireo tratran’ny fanolanana. Hitako ihany koa I Facebook group fa manolotena amin’io toe-javatra io sy ilay hetsika tokana izay nahitana hevi-baovao toy ny T-shirt asiana ny teny filamatra manohitra ny fanolanana, mba hanome fahakivina ny lehilahy tsy hanadala/hierisetra ny vehivavy intsony satria tsy irian’izy ireo ny hitrangan’izany tarehin-javatra izany amin’ny reniny/ny anabaviny/ny vadiny sns.
Amin’ny fo manontolo no anohanako ny ezaka ataon’izy ireo mba hametrahana fetrany amin’ny herisetra ara-nofo. Kanefa, tsy mino aho hoe ato ho ato ny fiovana, raha amin’ny ankapobeny.
Milaza izy ao amin’ny teniny voalohany izay mamariparitra ilay mpiherisetra:
Mino aho fa ho hitantsika matetika ny olona maro voadona arahana vono mahery vaika sady matetika. Amim-panetre-tena no hilazako hevitra fa misy sosona maro ny olana iray. Eo amin’ny velarany ambony dia hita fa mihaza vehivavy ireo mpandravarava ny filana ara-nofo satria tratran’ny fitaka entin’ny nofo izy ireo, toy ny trangan-javatra tamin’ny Maadi ohatra dia nitrangan’ny fanerena ara-nofo an-keriny. Ny zava-marina kosa aloha, dia vitsy ny fanadalana madinika miangavy firaisana ara-nofo fa ny fampiasana hery sy bontolo no betsaka.
Amin’ny fomba ahoana moa ny fanolanana no mitranga?
Misy ireo mpanadala no entin’ny fanairana ara-nofo amin-kerisetra mamely ny vehivavy. Anisan'izany ireo lehilahy manana fahasahiana fantatra efa nanimba ny sainy sy ny lanjany. Mino izy ireo fa tian’ny vehivavy ny fanolanana na hoe eritreretin’ny vehivavy ho toy ny dokadoka ny fanadalana ara-nofo. Ity karazan’eritreritra ity no matetika mitarika ho amin’ny fanolanana.
Toy ny fanadalana miverimberina, dia manamarika I Wandering Scarab:
Sarotra ho azy ny mametraka sy mikojakoja ny fifandraisana indrindra ny fiarahana amin’ny vehivavy. Tsy mijery afatsy ny tenany izy ary ananany ny olana maro samihafa, ara-tsosialy sy ara-batana. Fa raha ny eritreritro aloha, ny karazana fanadalana amin’ny ankapobeny ao Ejipta dia avy amin’ny hatezerana. Ainga sy fitarihana avy ao anaty vatana arahana tsy fahaiza-mandanjalanja tena no antony mahatonga ny fihetsiny hanao ny herisetra ara-nofo. Matetika ity no herisetra ara-nofo tena zava-doza sy mahery vaika indrindra. Izy ilay karazana lehilahy mampiasa ny fahaiza-miteny tsy misy maodiny sady miravaka aoka izany, ary izy ihany ilay olona milentika ao anatin’ny fomba fisainana ambany toy ny toe-javatra nitranga tamin’ny fanadalana nataon’I Eid. Izy ilay lehilahy tsy matahotra ny sazy miandry azy sady mahafantatra ny lalana ary ny andri-masom-bahoaka dia miasa ho amin’ny fiainany.
Mitarika amin’ny fepetra mandiso fanantenana ny andron’ny fahakivina
Tratran’ny fanararaotan’ny rafitra ara-politikan’I Ejipta isan’ora sy isan’andro ny antsasak’ireo lehilahy Ejipsiana, izany dia mipaka hatrany amin’ny fidin-dronono sy ny fahafaha-mifidy amim-pahalalahana sy tsy misy faneriterena. Misedra fiainana ara-politika, ara-toekarena, ara-tsosialy I Ejipta. Ny politikan’ny olom-bitsy no mitondra ny firenena ary mitazona ny maro eo ambany ny fanaraha-maso hatrany. Ny farim-piainana dia tena ambany tokoa. Ny vidin’entana ilaina andavan’andro koa etsy andaniny tena midangana kanefa ny karama miditra dia mijaonona ambany dia ambany. Raha tsy misy ny fanampiana ara-bola, dia tsy afaka manangana sy mikarakara fianakaviana ny lehilahy Ejipsiana. Tsy hanana ny fifehezan-tena ho amin’ny hoaviny sy amin’ny fitadiavana ny lanjany mba ho entiny miavo-tena izy. Samihafa anefa ny fomba isedran’ny lehilahy ity olana ity. Ny sasany amin’izy ireo dia misedra amin’ny fomba mamokatra; ny hafa kosa mampiasa izany mba hampitombo ny hatezerany, dia manafika olona avy eo.
Tsy hita izay dikany araky Wandering Scarab raha ampitahaina amin’ireto tratran’ny fanolanana ireo reny/anabavy/zanaka vavy/vadin’ireo mpanolana satria:
Eo imason’ny mpanolana dia ny vehivavy rehetra no voatifitra amin’izany, ankoatr’ireo vehivavy ao amin’ny fianakaviana isan-karazany. Tsy hitany hoe vehivavy koa anie ireo olona ireo, fa ny andraikitr’izy ireo ihany no entiny hametrahana ny famaritana.
Mandraraka lasantsy anaty afon’ny herisetra ara-nofo:
Matetika no mandao ny vehivavy iharan’ny herisetra ireto lehilahy raim-pianakaviana. Maro tamin’izy ireo no miteny hoe “fahadisoana avy aminareo vehivavy no nahatafalatsaka anaty toerana sy fotoana tsy marin-toetra izao” na koa hoe “Nareo ihany no nisintona izany taminareo noho ireto akanjo tsy maontina anaovanareo”.
Mitendry soratra amim-pilaminana ny mpitoraka bolongana manao hoe:
Ankoatry ny finoana ara-pivavahana misy anay, dia nampianarina anay tamin’ny fahatanoranay fa rehefa manao fahadisoana ny olona iray dia voavela heloka raha mibebeka izy. Izaho manokana no efa nahita lehilahy maro nanana izany fomba fieritreretana izany. Mino ry zareo fa tsy maninona akory ny mihery setra amin’ny vehivavy raha toa ka amin’ny farany dia handeha hibebaka ry zareo ary hahazo ny famelan-keloka rehefa avy eo.
Ny lalana sy ny fitsipiky ny lalana
Mampalahelo, fa na eo aza ny lalana ao Ejipta izay manome ny sazy ho an’ny mpiherisetra ara-nofo, dia tsy mihatra izany izany lalana izany. Amaivanin’ny Polisy sy ny mpitondra voakasik’izany ny fitarainana, ary matetika mandiso fanantenana ho an’ny vehivavy handroso hatrany ary hitondra ny fitarainana.
Ny fototry ny olana dia:
Inoan’ny lehilahy Arabo amin’ny ankapobeny fa izy no ambonin’ny vehivavy, n’inona n’inon fomba entiny manazava izany, na ara-pivavahana, na ara-tsosialy, na arak’izay anananao. Ary tsy manao safobe mantsina akory aho. Mahatsikaritra aho fa misy ireo lehilahy mendrika izy mbola mipetraka ao Ejipta. Amin’ny fomba hafa ny fiheritreritr’izy ireo. Mino ny fitovian-jo sy ny zava-drehetra ry zareo fa vitsy dia vitsy izy ireo. Mampalahelo fa ny ankamaroan’ny lehilahy Arabo dia tafalatsaka ao anatin’ilay sehatra hafa.
Ny toroheviny farany :
Ity jiro ity no entiko hanomezana hery ny vehivavy tsy ho lasibatry ny herisetra. Fifandraisana maha-te ho tia ny Facebook, ary azo antoka fa tsy ahatahorana ny akanjo T-shirt. Kanefa mino kosa aho fa ny fomba tsara indrindra isorohana ny fanolanana dia ny hoe mailo foana ny tena ary mianatra mamantatra ny fahalemen’ny mpiherisetra. Zava-dehibe ny aina, eny fa na dia midika hoe tsy maintsy vonoina aza ity mpanafika na avela mitondra kilema fotsiny ihany.